Imisebenzi yangasese yabafundi - Okushoyo nokuphikisana nomsebenzi wabafundi
Umsebenzi wangaphandle wezingane nabasha
Yiziphi izinzuzo umsebenzi ohlangothini owenzela izingane?
Lapho izingane abe isifiso ekhetheke kakhulu okungakwazi kalula ukuhlangabezana, nabo beveza umbono ukuxhasa wona ngokwawo leyonto. Ngisho izingane ezifunda esikoleni sabaqalayo ukuqasha ngo- ngo- kagogo, ashanele igceke futhi ujabulele euro ngaphezu kokuchitha imali. Nokho, ngokuqinisekile lutho olubi ngisho izingane ekhaya bebutha ekamelweni zezingane "Ukugqilazwa kungavunyelwe" amazwana, ngokungazelelwe ukuhambisa ngokuzithandela ngethemba kokuchitha imali.
Ngabe izingane zingayithola nini umsebenzi wesikhashana?
Umbuzo awukona kuphela, ungakhona nini, futhi futhi, uvunyelwe nini? Yiqiniso, njalo njalo ngemisebenzi encane ehambisana neminyaka futhi ayikho emisebenzini emangalisayo.
Ingabe imisebenzi yesikhathi esithile iyasiza ezinganeni?
Kodwa-ke, njengoba izingane zikhula, nazo zifuna ukuthatha umsebenzi ofanele womfundi bese umbuzo walokho okuvunyelwe usesikhathini.
Uma izingane zingakabi naminyaka engu-13 ubudala, azivunyelwe ukusebenza ngoba "uMthetho Wokuvikela Intsha" ulawula lokho
I-13 noma i-14-ubudala ubudala bangathola okuthile ngemvume yabazali babo, uma kunomsebenzi olula ongathinti ukusebenza esikoleni
Ngokuphambene, i-15-18 intsha ivunyelwe ukusebenza amahora angu-8 ngosuku, kodwa akukho imisebenzi esindayo, eyingozi noma ecindezelayo ekushiseni noma kumsindo
Lokho abantwana abakuthola ngemva kweminyaka engu-13, akudingeki bakhokhe intela, uma nje imali engenayo ingadluli inani le-450 Euro ngenyanga. Kodwa-ke, abazali kufanele baqiniseke ukuthi "umqashi noma iklayenti" kufanele abavikele ngokugcwele umshuwalense wezimali.
Akuyona nje amantombazane kodwa nabafana abasiza kakhulu kule minyaka. Bafuna ukusiza abantu asebekhulile ukuba bethenga noma bahambisane nabo. Ukunakekelwa kwezingane ezincane noma ukwenza amaphephandaba kuyinto evame ukuqhutshwa kwentsha. Phakathi kwe-13 ne-15 iminyaka bayavunyelwa ukwenza lokhu amahora amabili ngosuku, kodwa kuphela kuze kube kusihlwa i-18 clock.
Uma izingane nentsha zenza oxhumana nabo bokuqala nomhlaba womsebenzi, lokho kungaba nemiphumela emihle.
Ngaphandle kwemali encane yepokhethi abayitholayo, bangabona nokuthi kukuthini ukuzinikela komunye nomunye. Futhi uma kukhona imali yalokho, bafunda nokuthi bangayisebenzela kanjani. Lokhu kungaba nomthelela ekusingatheni kwemali kamuva.
Futhi, umthwalo abawuthatha emsebenzini ungabafundisa kakhulu. Izingane ezikhulile noma intsha zingathola ukuthi yiziphi izithakazelo ezithintekayo abazenzayo ngaleyo ndlela yesikhathi esithile noma ehlobo. Izingane ezifunda ukusebenza nazo zifunda ukuthi kubaluleke kangakanani isikhathi samahhala.
Izizathu ezikhuluma ngokumelene nomsebenzi
Yiqiniso kungase kube nokulimaza uma izingane ziphishekela umsebenzi ohlangene. Abazali kufanele bahlanganyele ngokuqinisekile uma izingane zinganaki isikole noma umndeni ngokusebenzisa umsebenzi wesikhathi esithile. Uma zitholakala kuphela lapho zisebenza khona, lokhu kungase kube yisibonakaliso sokungahambi kahle ekhaya.
Kunoma yikuphi, abazali kufanele bayeke umsebenzi uma ingane isuke iphelile futhi ixhomeke ngokukhathele noma iveza izinguquko zengqondo. Ukwenza imali nakho kujabulisa abafundi, kodwa hhayi uma imali iholela ekushintsheni kokuziphatha kwabathengi.
Ukudla okunempilo kwezingane kanye nentsha
Ukudweba abantu abadala - kunganjani nje ukudweba ...
Ithelevishini yezingane | I-Internet ye-Media
Itiye lezingane | Ukudla nokuphuza izingane
Kungani imidlalo ibaluleke kangaka ezinganeni
Amaswidi kubantwana | ukudla
Imibhede ye Loft yezingane | Indlu nendawo yokuhlala